Inni uumee hin beeku sila? Inni Al-Laxiif, Al-Khabiir.” Suuratu Al-Mulk 67:13-14
Sagalee keessan gadi qabdanii ykn olkaastanii dubbattanii wanti Isarraa dhokatu tokkollee hin jiru. Wanti dhoksaa fi ifa bahe Isa biratti wal-qixa waan ta’eef. Rabbiin wanta qoma (laphee) keessa jiru ni beeka. Kana jechuun niyyaa, fedhii fi yaada nama hunda ni beeka. Ergasii ragaa sammuun itti yaadu danda’an ni dhiyeesse. “Inni uumee hin beeku sila?” kana jechuun Rabbiin uumamtoota hunda uumee fi sirreesse wanta isaan yaadanii fi niyyatan akkamitti hin beekne? Dabalataniis Rabbiin keessa wantoota Kan beeku ta’e osoo jiru akkamitti wanta isaan yaadanii fi dhoksatti dubbatan hin beekne? Hiika Al-Laxiif keessaa tokko gabroottan Isaatiif kan mararfatu, waan gaarii kan isaaniif fidu fi waan badaa isaan irraa deebisu.